PaveAI: Mumwe Munhu Akazopedzisira Awana Mhinduro muGoogle Analytics! | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 27, 2017 Muvhuro, Kukadzi 27, 2017 Douglas Karr
Kwemakore isu takanetsekana nevatengi uye nyanzvi kuita zvisarudzo zvisina kunaka zvichibva analytics. Pane zvikanganiso zvinoverengeka, kunyanya ne Google Analytics, izvo vanhu vasingawanzo kuziva nezve:
Traffic Yekunyepera - analytics traffic haina kusanganisira kushanya kunoitwa nemabhoti. Dambudziko nderekuti kune mamirioni e bots kunze uko anovhara kuzivikanwa kwavo sebhoti. Ivo vanoshanya kamwe kwenguva pfupi, vachiwedzera nemaoko ako mabhureki uye vachideredza nguva yako pane saiti. Pasina kunyatsoiritaira, unogona kuita sarudzo dzakaipa.
Ghost Traffic / Referral Spam - kune mapenzi kunze uko anokanganisa yako analytics pixel uye tyaira kumusoro kwako traffic kuratidza kuti iwo ari kutumira nzvimbo kune yako. Iwe haugone kana kuvadzivirira sezvo ivo vasingashanyire yako saiti zvachose! Zvekare, kusaseta kushanya uku kubva kwauri kunogona kukanganisa sarudzo dzako.
Traffic Isingazivikanwe - ko nezvevashanyi vakauya kune yako saiti nemaune, asi vakasiya nekuti vaitsvaga chimwe chinhu? Isu takave nemutengi kamwe yakatarwa yakakwira kwazvo kune yemunharaunda redhiyo kodhi yekufona kodhi. Pese paive nemakwikwi pawairesi, traffic yavo yaisvetuka. Isu takabvisa iro peji uye tikakumbira kuti ribviswe kubva kumainjini ekutsvaga - asi kwete zvisati zvakuvadza bongozozo kuchikwata chekushambadzira uko vasina kuchikwanisa.
Saka unosefa sei uye woisa chidimbu chako analytics data pasi kune chinoshandiswa, chikamu chinoshanda chinogonesa iwe kunyatso kuongorora hunhu hwevashanyi?
PaveAI: Yakagadziriswa Analytics Insights
Mauya, PaveAI. PaveAI inokutendera kuti ubatanidze Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram Ads (kuburikidza neFacebook Bhizinesi Manager) uye Twitter Ads. Chikuva chavo chinobva choshandisa AI algorithm uye dzakasiyana siyana dzinoverengeka classifiers zvichibva pane rako rekushambadzira data kutsvaga rese data raunoda kuti uite sarudzo dzakasimba. Iyo mitsara inotopa zvikamu uye mukana wavo wekuve mutungamiri kana kunyorera.
Takatora masisitimu akati wandei akashandura Google Analytics kuita Chirungu chazvino uye ikaratidza mamwe mushumo wakanaka kwazvo. Uye isu takavhiringidza netani yezvishandiso zve dashboard kunze uko… asi hapana chimwe chazvo chaipa vatengi vedu tarisiro yavanoda kana kutipa iwo maonero ataida kugadzirisa. PaveAI zvinoita zvese! Icho chokwadi chekuti ivo vanozozivisawo pane yako analytics zvinangwa uye nguva yechikamu yakakoshawo. Heano a shumo yekuenzanisira:
PaveAI Sample Ripoti - Lead Generation
PaveAI inotogadzira iyo data yevanopfuura mamirioni mazana mana evashanyi mwedzi wega wega. Ivo vanobvisa referrer spam otomatiki uye vanounza rako retsamba kunyorera data zvakare.
PaveAI: Makomborero uye Maitiro Ekushandisa
Mukuenzanisa kwavo, PaveAI yakabatsira vatengi kuwana avhareji 37% kuwedzera mukutungamira chizvarwa kana mari mushure memwedzi mitatu, uye avhareji 2x kuchengetwa yemasangano kweanopfuura gore rimwe nguva. Pasina kutaura nguva yavari kubatsira vashambadziri kuchengetedza mukuongorora nekunyora mishumo kubva kune akasiyana masystem.
Saina kumusoro kune gumi-Mazuva-Mahara PaveAI Muedzo
Mitengo inodhura zvisingaite kupihwa kukosha kwe data rakapihwa. PaveAI zvakare ine rezinesi rezvemabhizinesi, rezinesi re agency, uye whitelabeling inowanikwa.
Tags: aiAnalyticschakagadzirwa njereemail analyticsgoogle analyticsmutungamiri wechizvarwapaveaichokufenberapredictive analyticsmukana